जथाभावी बाटो काट्दै हुनुहुन्छ ? प्रहरी कारबाहीमा परिएला – Mission
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०७४
१६ जेठ, काठमाडौं । जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, सब-वेको प्रयोग नगरी जथाभावी बाटो काट्नुहुन्छ ? कि फुटपाथ छाडेर सडकबाटै जथाभावी हिँड्नुहुन्छ ? आजबाट यो बानी त्यागिदिनुस्, नत्र तपाईंले ट्राफिक प्रहरीलाई २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नपर्नेछ । पैसा तिर्नु चाहनु भएन वा सक्नु भएन भने प्रहरी कार्यालयमा ३ घण्टा नियन्त्रणमा राखिनेछ ।
प्रहरीले जेठ १ गतेदेखि यो ब्यवस्था लागू गर्ने भनेपनि स्थानीय तहको चुनावका कारण लागू गर्न सकेको थिएन । दुई महिनाभन्दा बढी जनचेतनाका लागि विभिन्न अभियान चलाएर यसलाई आजबाट लागू गरिएको हो । – अनलाइनखबर
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०७४ 12:42:27 PM |
Prevमतपत्र च्यातिएको घटनामाथि छानबिन गर्न अनुगमन टोली गठन
Nextबाँकेमा तीन अर्ब बढी बजेट